Tuta boro bái arde cóñço bái (Parrots – younger & elder brother) – Rohingya Language Foundation
ရိုဟင်ဂျာ စာဖြင့် ရေးသားထားသည့် “ကျေးညီနောင်” ပုံပြင်
TUTA BORO BÁI ARDÉ CÓÑÇO BÁI
Agor zobanat mazé uggwá gas ót duwá tuta táaitou. Tará dunú zon bái bái. Ítarattú fóuir beggín noó uçé dé ótolla uri no farér.
Ek dinná tuwán aái taráre urai loi giyói. Uggwá tuta sur ókkol aséde zagat foijjégói. Sur ókkol é ítare feñçai loizai, fali yoré raikké. Ar uggwá tuta bála manuíc (tobi) ókkol aséde zagat foijjégói. Ítare tobi ókkol é feñçai loizai, fali yóre raikké.
Ar ek din uggwá baaccá kélai tóu nioillé dé éçe, óran ói sur ókkol ór farar dháke, gas ór sáabat ziraiyé gói. Sur ókkol é faillé dé tuta íba yé baaccá ré deikké ár hoórde itaré maro. Itar cúna sañdi ar hoor ókkol kúli loifélo, én hoói guzorer.
Baaccá yé hoórde zaga yián tó bicí hótora. Yián tú zirai nofaríbou, én hoói hára hára giyégói.
Baade baaccá zaite zaite tobi ókkol aséde zagat mazé foíñcce. Yían ót abar zirai yé. Én cóm ot, tobi ókkol é faillé de tuta íba yé, deikké ár hoórde, óu baaccá sáb aiyó. Yián ót ziro. Ekkana thándha faní yó hóo, ar gas ór gula yó lo. Én hoói miçá hotá loi izzot goijjé.
Baaccá yé báfi yoré hoórde, óu tuta, yiar age aññí lootfaiyí dé tuta íba, tor díkka noó. Bicí hóraf tuta. Tui to bicí gom, én hoói tuta ré taarif goijjé.
Tuta ye hoórde, óu baaccá sáb, yiar age zibá hóraf tuta lootfaiyó íba añár cóñço bái. Añára diní bái tuwán ór zoriya ek zon ek mikká ek mikká síra ói giílam gói de. Añár cóñço bái sur ókkol ór éçe foóñsi yóre, sur or dikká hóraf ói giyói. Lekín aññí bála manuíc, (tobi) ókkol ór éçe foóñsi yóre bála óiyi.
Sur or fúañti bírile sur.
Dhahait or fúañti bírile dhahait.
Tuta = ကျေး
Boro bái ardé cóñ çobái = ညီနောင်
Gas = အပင်
Tará = သူတို့
Ítarattú = သူတို့မှာ
Fóir = အတောင်
Uri nofaré = မပျံသန်းနိုင်ပါ
Tuwán = လေမုန်တိုင်း
Sur = သူခိုး
Zagat = နေရာမှာ
Fali yóre raikké = ကျွေးမွေးထားသည်
Tobi = ရသေ့
Bála manúic = သူတော်ကောင်း
Baaccá = ဘုရင်
Kélai tóu = ကစားရန်
Óran = မောပန်းသည်
Sáabat = နေရိပ်မှာ
Ziraiyé = နားနေ၏
Cúna sañdi ar hoor = အဝတ်တန်ဆာ
Guzorer = ဟစ်အော်သည်
Foíñcce = ရောက်လေ၏
Thándha faní = အေးမြသောရေ
Gula = သစ်သီး
Yiar age = ယခင်က
Hóraf = ရိုင်းစိုင်းသော
Gom = ကောင်းသော
Taarif = ချီးမွန်းခြင်း
Ek mikká ek mikká = တကွဲတပြားစီ
Lekóya: Citizen of Arakan, Bormá, Aikkaf(Aikkab) Nazir Fara
ရှေ့သရောအခါ အပင်တစ်ပင်၌ ကျေးညီနောင်တို့ နေကြလေ၏။ သူတို့သည် အတောင်မစုံသေးသဖြင့် ကောင်းစွာ မပျံနိုင်ကြချေ ။
တနေ့သ၌ လေပြင်းမုန်းတိုင်းကျ၍ ထိုကျေးညီနောင်တို့ လွင့်ပါသွားကြ၏။ တစ်ကောင်မှာ ခိုးသူတို့နေရာ၌ကျ၍ ခိုးသူတို့က ကောက်ယူကျွေးမွေးထား၏။ ကျန်တစ်ကောင်မှာ ရသေ့တို့၏ ကျောင်းဝင်းအတွင်း၌ကျ၍ ရသေ့တို့က ကောက်ယူ ကျွေးမွေးထား၏။ တစ်နေ့သော် ဘုရင်ကြီးတစ်ပါးသည် တောကစားထွက်လာရာ မောပန်းသဖြင့် ခိုးသူတို့ရွာ အနီးရှိ သစ်ပင်ရိပ်တွင် အပန်းပြေ၏။ ခိုးသူတို့မွေးထားသော ကျေးသည် ဘုရင်ကြီးကိုမြင်လျှင် ဤသူကိုသတ်လော့။ အဝတ်တန်ဆာတို့ကို ယူကြကုန်လော့ဟု ဟစ်အော် တိုက်တွန်းလေသည်။
ဘုရင်ကြီးလည်း ဤအရပ်သည် ဘေးအန္တရာယ်များ၏။ မနေသင့်ဟု ဆိုကာ အမြန်ထွက်ခွာသွားလေ၏။
ဘုရင်ကြီးသည် ရသေ့တို့နေရာသို့ ရောက်၍ နားနေပြန်၏။ ထိုအခါ ရသေ့တို့မွေးထားသော ကျေးက အရှင်မင်းကြီးကြွပါ။ အပန်းဖြေပါ။ အေးမြသော ရေကိုသောက်ပါ ။ ဤသစ်သီးကို သုံးဆောင်ပါဟု သာယာသောအသံဖြင့် ကြိုဆို၏။
ဘုရင်လည်း အသင်ကျေး ယခင်ငါတွေ့ခဲ့သာကျေးသည် သင်ကဲ့မဟုတ် ရိုင်းစိုင်းလှ၏။ သင်မှာမူကား ယဉ်ကျေးလှပေစွဟု ချီးမွမ်း၏။
အရှင်မင်းကြီး ယခင်ကျေးသည်ကျွန်ုပ်၏ညီပင်တည်း။ ကျွန်ုပ်တို့ ညီနောင်သည် လေမုန်တိုင်းကြောင့် တကွဲတပြားစီ ဖြစ်ခဲံကြရပါသည် ကျွန်ုပ်၏ညီသည် ခိုးသူထံရောက်၍ ကြမ်းတမ်း ကျွန်ုပ်မှာမူ ဆရာရသေ့တို့ထံရောက်၍ နူးညံ့သိမ့်မွေ့ရပါသည်ဟု ကျေးကဆိုလေသတည်း။
Hózorot Muúsar Dorhás Allahr Dorbar ot (Musa’s request to Allah)